Maqaallada ku saabsan Afrika
Sida shaqo looga raadsado Koonfur Afrika
Waxaa laga yaabaa 23, 2021 Maitri Jha Africa, shaqo
Haddii aad damacsan tahay inaad ku noolaato Koonfur Afrika, waxaad xaqiiqdii ubaahan doontaa shaqo soo jeedin intaadan wadanka soo galin. Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay xirfadaha saxda ah, waxaad heli doontaa shaqooyin mushahar fiican qaata. Shaqaalaha ku meel gaarka ah iyo kuwa mushaharka yar, dhanka kale,
October 31, 2020 Shubham Sharma Uganda, fiisada
Ma qorsheyneysaa inaad safar ugu baxdo Uganda? Hadday haa tahay, markaa waa inaad rabtaa inaad wax ka ogaato fiisaha Uganda. Si kastaba ha noqotee, hadda geeddi-socodka dalabka fiisaha uma baahna safar safaaradda ugu dhow ee Uganda. Kani waa
Fiisaha Kenya ee Hindida
October 29, 2020 Shubham Sharma Kenya, fiisada
Kenya waa dal Afrikaan ah oo caan ku ah jardiinooyinka Safari, laakiin dowladda waxay heysataa waxyaabo badan oo badan oo ay bixiso, sida reef iyo xeebo. Sidoo kale waxaa loo yaqaan Jamhuuriyadda Kenya, Kenya waxaa loogu magac daray Mount Kenya, halka ugu sarreysa Kenya.
Gaadiidka Ugaandha, Sida loo aadayo Uganda
June 6, 2020 Maitri Jha soo qaado, Uganda
Ku dhaqaaqista Yugandha waa fududahay, dhakhso badan oo sahlan. Gaadiidka dadweynaha ee dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa gaari kara dhammaan qeybaha dalka. Dalku waa dhul cidlo ah. Laakiin wali, gaadiidku aad ayey u fiican yihiin. Ugandha si fiican ayey ugu xiran tahay meel u dhow